Hiran State - News: HS:- Idaacada Radio Mogdisho oo ku hadasha codka dowlada oo uu saameeyey qilaafka.
HS:- Idaacada Radio Mogdisho oo ku hadasha codka dowlada oo uu saameeyey qilaafka.
HS:- Marka uu yimaado qilaaf ka dhaxeeya dowlad marka hore isku ujeedo aheyd kadibna soo kala dhax galo mugdi waxuu qilaafkaas saameyn ku yeeshaa hayaddaha dowlada oo dhan.
Hadaba tan iyo markii uu yimid qilaafkii soo kala dhax galay labada Shariif, Cabdiwali, iyo Mahiga ooisku dhinac ah iyo mudanayaasha barlamaanka oo dhianc ah kana soo bilaawday shirkii Kampala Acord waxaa maalinba maalinta ka danbeysa sii kor dhayey dib u dhaca xukumada iyo qilaaf intiisa badan ku sameysan dano shaqsiyadeed.
Hadaba dowladahii kumeel gaarka ahaa ee horey u jiray intooda badan ma qabi jrin idaacad amaba qalab warbaahineed waxeyna ku tiirsanaan jireen idaacado gaar loo leeyahay oo ka howl gali jiray magaalada Mogdisho laakinse xukumadahii ugu danbeeyey waxey fursad u heleen iney helaan idaacad ku hadasha codka dowlada waxaana dib loo howl galiyey idaacadahii Radio Mogdisho.
Hadaba maalmahii tagay waxaa soo baxayey qilaaf aan dibada imaan lagana yaabo inuu si rasmi ah banaanka u yimaado kadib markii qaar shaqaalaha idaacada ka tirsan ay la safteen hal dhinac sida labada Shariif, Cabdiwali iyo Mahiga iyagoo lagu wargaliyey in aysan soo tabin karin kulamada ay yeeshaan mudanayaasha barlamaanka maadama ay yahiin hayaddii sharci ilaalinta.
Mid ka mid ah shaqaalaha idaacada Radio Mogdisho oo u sir waramay rag saaxiibadiis ah ayaa yiri "Radio Mogdisho waa idaacad uu maamulo wasiirkii hore ee Boostada iyo Isgaarsiinta Cabdikarim Jaamac maadama shaqaalaha ka shaqeeya intooda badan ay yimadeen xiligii uu isagu joogay talada inteeda badan waxey ka timaadaa isaga sidaasi daraadeed shirarka ay iskugu yimaadaan mudayaasha in aan la soo gudbin waa wax ay inta badan shaqaalaha idaacada wada ogyahiin tiro yar maahane".
Hadaba mid ka mid ah shaqaalaha idaacada ayaa lagu soo waramayaa hadii masuuliyiinta dowlada howlahooda si isku mid ah dhex dhexaad looga noqon waayo inuu faafindoono sir badan oo aysan ogeyn bulshada Soomaaliyeed taasi oo lumin doonta kalsoonida lagu qabo wasaarada warfaafinta iyo qaabka ay u shaqeyso.
Sikastaba marka laga soo tago sida uu qilaafka ka dhaxeeya masuuliyinta dowlada sameyn ugu yeeshey xitaa dhalinyaradii ka shaqeyneysay Radio Mogdisho hadane kulamada ay inta badan qabsadaan mudanayaasha lagama soo daayo radio Mogdisho amaba lama soo qoro waxeyna arintaas iska noqotay wax iska caadi ah.
Isku day aanu la sameynay xafiiska wasaarada warfaafinta ayey inoo suugo galiweysay walow aanu aarintaan jiritaankeeda isku dayi doono in aanu waadax uga dhigno bulshada Soomaaliyeed ee u ooman dowlad iyo nidaam shaqeey.
Marka laga hadlayo hanaan dowladeed warbaahinta magac dowladeed ku hadasha waa mida kaliya ee laga doonayo iney ilaaliyaan hanaanka dowladeed waxkastana ka noqdaan dhex dhexaad qilaafkasta oo yimaada.Nasiib wanaag dalka Soomaaliya dhibaatada ka dhacday ma ahan wax sahlan dhibaataduna waxey sameysay cidkkasta iyo hayaddkasta oo dowlada ka tirsan.
Waxeysa su'aal la taagan tahay wararka iyo aqbaraha laga qoro masuuliyiinta dowlada maxaa u diidaya in laga qoro kulamada ay yeeshaan mudanayasha baarlamanka Soomaaliya mise dalka Mahiga iyo labada Shariif ayaa leh ayuu yiri nin dhalinyaro ah oo Mogdisho kunool?
· admin on February 24 2012 15:04:31 · 0 Comments · 2417 Reads ·
14,600,086 unique visits